75 Mkpebi Afọ Ọhụrụ nke 2011ntanetị XNUMX | Martech Zone
Oge erugo mgbe afọ ga-agwụ. Afọ a nyere anyị ọtụtụ ihe ga - ewe iwe banyere… site na ịchịkwa obere ụlọ ọrụ ole na ole ruo na omume mgbasa ozi anaghị anabata ọha.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe na-enye m nsogbu n'ezie, yabụ ka anyị dozie ihe ndị a ka ha ghara ime na 2011:
Kwụsị IWU. Dị ka ọnwụnwa dị ka ị nwara, wepụ mkpịsị aka gị na CAPS LOCK.
Ọ bụrụ na m wepu aha na email gị, ezigala a ozi nkwenye m.
Dochie ihe osise nke egg nwere ezigbo foto gị na Twitter. Omeela ọnwa atọ na abụọ Tweets.
Ezigala malitegharịa. Emela ọbụna mmalite. Anyị emeela LinkedIn maka afọ 8 ugbu a, jiri ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike itinye ya Ihe 140, zitere m ozi.
Ọ bụrụ na enweghị m ike ịgụ email gị na 2 sekọnd, kpọọ m.
Hapu ozi, aga m email ị laghachi.
Na-agafe oke! Anyị na-ahụ ụzọ ka ukwuu n'oge a. Site na Carissa Newton.
Apple: Nchọpụta hụ na i meziri nke na - achọghị ihicha ma ọ bụ bido ịmaliteghachi ahụigodo na ngwaọrụ gị.
Kwụsị iziga m ozi azụ na oge maka oge hazie nzukọ. Jiri nke m Osisi!
Kwụsị iji foto ochie dika avatars, anyi ma na odighi adi ka nke a. Mgbe anyị zutere n’ihu, agaghị m amata gị ma ọ bụ na m ga-eche ihe kpatara m ji agwa mama m onye na-eso ụzọ. Ọ dị mma, m mara abụba ma jọọ njọ ugbu a, kwa.
Kwụsị ọbọgwụ. Mgbe ọ bụla ị hụrụ enyi gị ka ọ na-eji ya, ị ga-akwa ha emo n’ihu ọha. Ha ga-ekele gị n'ime afọ 2 mgbe ha chọtara nzuzu ha lere anya.
Hey Google… ma ọ bụrụ na ị hụrụ, na Industrylọ ọrụ SEO bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na Azụmaahịa. Nke ahụ nwere ike ịpụta na enwere ihe na-adịghị mma na algorithm gị n'ihi na ụlọ ọrụ na-etinye ego nde mmadụ iji megharịa ya. Kwụsị ileghara ya anya.
Ọ bụrụ n’ikpebie mepee ụlọ ahịa maka geeks, gbaa mbọ hụ na ị ga-echekwa 2XL site na 5XL uwe elu. Anyị enwetaghị ozu ndị a site na P90X, anyị nwetara ha site na ịde blọgụ.
Kwụsị ime ka m banye na saịtị gị wepu aha. Mụ na gị ma na m furu efu paswọọdụ 4 afọ gara aga mgbe m debanyere aha. Agaghị m eleta saịtị gị kemgbe - izipu ozi ịntanetị kwa izu agaghị enyere aka.
Mmadu biko mee a WYSIWYG ederede nchịkọta akụkọ nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na HTML5 nwere ike itinye vidiyo, gịnị kpatara na anyị enweghị ike ịnwe nchịkọta akụkọ nke ala?
Kwụsị ime nkwa na ịntanetị iji nyere mmadụ aka ma ọ bụ kwalite ihe na-enweghị usoro. Site na Amy Stark kwuru.
Biko gwaa ọchịchị, ọchịchị ọ bụla, ka ọ kwụsị ịnwa iji .ntanet egwu. Ọ bụ naanị ihe na - arụ ọrụ ọzọ - n'ihi na gọọmentị emetụbeghị ya.
Ghọta na ọ bụrụ na ị tinye mgbasa ozi n'ihu m na a Mafere ya njikọ, amabatara m mgbasa ozi na mbipụta gị.
Kwụsị ịgwa m banyere gị Ngwa iPhone. Ọ dịghị onye chọrọ ịma, anyị niile nwere ndị Droid.
wepụ Na-egwu nri, Facebook… ọ bụ naanị larịị creepy.
Kwụsị ịtụle ụlọ ọrụ dị na ọtụtụ ijeri mgbe ha dị afọ ole na ole na-enweghị uru ọ bụla. Ha abaghị uru, ọ dịghị onye kwesịrị ịkwụ ya. Ma ọ bụrụ na ha enye gị $ 6 ijeri, abụla onye nzuzu ma jụ onyinye ahụ.
Kama iwere mmadụ na-ekwu okwu banyere otú ihe dị ukwuu gị software bụ, ime anyị niile a amara na idozi m achọ ịma software kama. Nwere nnukwu eserese na onye na-abụ abụ na onye na-abụ abụ, anyị ka na-anwa ịrụ ọrụ na njehie edemede ahụ nke nọrọ kemgbe afọ 4. Adabaghị.
Nwa m nwanyị arịọla m ka m kwụsị ịza ajụjụ na ibe Facebook ya ma yie ụmụ okorobịa ahụ na-achọ iti ya ihe egwu. M ga-echebara ya echiche. Echere m banyere ya… nope.
Kwụsị ụlọ ọrụ ikpe site n'aka onye isi ha na jeans na okpu ehi, ebe dị jụụ nke ụlọ ọrụ, uto onye ọrụ, ma ọ bụ ego VC C anyị emeworị nke ahụ na 90 ma ọ naghị arụ ọrụ. Bido ikpe ụlọ ọrụ ikpe site na mgbe ndị ọrụ ga-awụpụ ụgbọ mmiri mgbe onye ọzọ dị jụụ na jeans dọwara na okpu ọchị na-abịa.
Na-eziga ndị na-ede blọgụ dị ka m ihe egwuregwu ụmụaka yabụ anyị nwere ike ime ka à ga-asị na ha bụ ndị ezi-uche, dị mkpa, ma gaa n’ihu na-akọwa onwe anyị ndị na-egbu egbu. IPads nabatara:
120 E Market St, Nnukwu 940
Indianapolis, NA 46204.
Peoplefọdụ ndị kwụsịrị ịgụ na Net. Bido a podcast, mee a videoJiri dị iche iche na-ajụ ase iji ruo n’ebe ndị dị iche iche nọ.
Chọọ ndị ọkachamara - kwụsị ịgwa onye ọ bụla nke ahụ elekọta mmadụ amị na ha ga-emefu ego ha niile n'ịchọ.
Ndị ọkachamara na Social Media - kwụsị ịgwa onye ọ bụla nke ahụ ọchụchọ eme nzuzu na ha ga-emefu ego ha niile na mmekọrịta.
Website webụsaịtị wee nwee ebumnuche atọ: Njigide, Ntinye na Nnweta. I chefuru otu n’ime ha, ọ bụghị ya?
Companylọ ọrụ gị nwere ọfịs na-eri okpukpu iri karịa ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ dịghị onye jụrụ ihe laghachi azụmaahịa ga-anọ n'ihe ndina akpụkpọ anụ, kwụsị ịjụ ụlọ ọrụ gị n'ịntanetị. Na-emefu ego ahụ, chọọ ọkachamara, ị ga-enwetakwu nlebara anya - ekwere m gị nkwa.
Kwụsị ikwu banyere ole peeji nke ị na-enweta. A na-azụ ahịa na dollar na cents. Ọ bụrụ n’ịnaghị akwụ ndị ahịa ụgwọ, atụmatụ gị ga-emebi.
Kwụsị ịnwa ịbụ # 1 maka isiokwu kachasị sie ike mgbe enwere ọtụtụ narị ndị ọzọ mkpa Keywords nke ahụ ga - eme ka ụlọ ọrụ gị rụọ ọrụ.
Kwụsị ịnwa ogo mba ụwa mgbe gị ahịa-isi bụ n'ime 25 kilomita nke gị ọrụ. Ọ dịghị onye na Maui na-eche banyere nri ehihie gị ọ gwụla (belụsọ na ịnọ na Maui).
Mba, ngwa ị chọrọ itinye ego na ya agaghị eme ya niile. O nwere ike ọ gaghịdị eme ihe onye ahịa ahụ kwuru na ọ ga-eme. Na atụmatụ kwere nkwa na ntinye ọzọ? Ha anaghị abịa, ma.
Nọgide na ihe dị gị mma, were ego ndị ọkachamara na a nwapụtara ahụmahụ na-enyere gị aka ịchị ndị ọzọ.
Ọ nwere onye nwere ike ịzụta Yahoo! ugbua?!
Ọ bụrụ na ị zitere m na m azaghachila, biko ezunyela m tweet, ozi Facebook, ozi ederede ma mepee windo nkata. M azaghị n'ihi na m na-arụ ọrụ na-ebute ụzọ… na ị bụghị otu n'ime ha (taa).
Facebook Mmepe… nwere ike ị dị nnọọ ịhapụ ọgbaghara interface naanị maka a di na nwunye izu. Biko?
Na-eme ndị mmadụ ihe ọchị ka ha na-aga Hooters, mana ị ga-azụta ngalaba site na GoDaddy? N'ezie?
Ọ bụrụ na ị karịrị nke mbụ, ị bụghị beta ọzọ. Kwụsị ịnwa inye ndị mmepe crappy ihe ngọpụ maka nzuzu gbajiri.
Ahịa gị n'ịntanetị abụghị ọrụ, ọ bụ mmefu ego nke chọrọ ndozi, njikarịcha, na nkwalite na-aga n'ihu. Tinye ya na mmefu ego nke 2011 ma hụ na ị nwere ike ịlele nlọghachi na ntinye ego.
Ma eleghị anya, ị gaghị eme nke ọma elekọta mmadụ media.
Kwụpụ si Flash. Ọ dị mma mgbe ọ dịgidere… hapụ ya maka ndị na-ese foto na ndị mmepe egwuregwu. Ihe ọ bụla ọzọ kwesịrị ịbụ HTML5, Ajax, na CSS. (@IGIHE zigara m nnukwu edemede na HTML na Flash.)
Kwụsị ikpe m ikpe ole Fans na-eso ụzọ Enwere m. Na-akwọ m mkpụrụ na-anwa ịdebe.
Ọ bụrụ na otu n'ime ndị na-ede blọgụ kachasị amasị gị, onye nyeere gị aka ịmeziwanye ọrụ gị ruo ọtụtụ afọ, na-apụta na akwụkwọ. Gaa zụta ya - ọ bụ opekata mpe ike ịme. 😉
Ànyị niile na-eme atụmatụ ịbịa SXSW ime oriri na ọ ga-efunahụ uru otu izu?
Ọ bụrụ na ị na-na na a nnukwu odeakụkọ, kwụsị ịkwado onye mgbasa ozi gị buru ibu ma pụta ebe a wee mee ego gị na ide, na-akuko ma na-eme ya na-enweghị ụfọdụ ochie editọ ma ọ bụ ndị nkwusa tearing gị ọdịnaya iche. Ọ bụrụ na ha dị mma na ya, ụlọ ọrụ ha agaghị aga ụlọ mposi.
Social mgbasa ozi na ndị na-ahụ maka ịre ahịa n'ịntanetị abụghị Amish. Ọ bụrụ n ’ị ga - emeli ya, kwụọnụ ha ụgwọ… ma ọ bụrụ na i meghị ya, gbaa ha ọkụ. Otu iko kọfị gbanwere maka ndụmọdụ dị mma anaghị akwụ ụgwọ ụlọ.
Nyocha njirimara nke ọchụchọ chọrọ nhazi saịtị, nhazi peeji, njikarịcha ọdịnaya na nkwalite saịtị. Y’oburu na inwetachaghi ihe ndia, ikuchaghi SEO okacha amara.
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na elekọta mmadụ media, ị na-enye ụzọ doro anya maka netwọkụ ị ga - ewere ka gị na ya wee zụọ ahịa? (ntụgharị. Kpọọ na Action, Ibe Ọdịda, ,dị, wdg)
Justin Bieber: Nkeji 15 nke ịbụ onye ama ama dị ọnwa asatọ gara aga. Gaa… wee gbaa ntutu gị n'ụzọ ziri ezi.
Otutu mmadu mmadu na agu akwukwo gi na a ngwaọrụ mkpanaka. Yourlọ ọrụ gị ọ na - arụ ọrụ n ’ngwaọrụ mkpanaka? Ọ kachasị maka iPhone, iPad, Droid na Blackberry?
Ọ bụrụ na ị mebeghị ihe, kwụsị bust bọọlụ onye ọ bụla na-akatọ ihe ha rụzuru.
Kwụsị ime ka ndị na-emepụta weebụ gị mee ka ihe rụọ ọrụ Internet Explorer 6. Ọ bụghị naanị na ị na-akwado ihe nchọgharị mebiri emebi, na-enweghị nchebe, ị na-atụnyekwa mmanya na egbu egbu.
Eeh, dika eziokwu bu na m / nọ / ga-adị ọrụ n'aka.
Ekwela ka ndị mmadụ na-esiri gị ike gbasara akpaaka na na-agbakọ ọdịnaya ha. Ha nwere mkpara nke 3 ma nwee ndị na - agụ 50,000… nye ha ezumike!
Nna, biko kwusi iziga m ozi ịntanetị aka nri nke akwụchara 7 afọ gara aga Snopes. The NSFW foto nke ụmụ nwanyị mara mma ka dịkwa mma, agbanyeghị. Hụ nwa gị n'anya, Doug.
Ọ bụrụ na ị ka na-eji popover / popunder windo na mgbasa ozi, anyị ghọtara na ị na-achọsi ike na enweghị ike ịme ego na ntanetị. Gaa ree akwukwo ederede.
Kwụsị ịrịọ m ka ọ bụrụ enyi gị akuku anọ ra nrata mgbe ibi na otu kọntinenti na amaghi m gi.
Google, biko tinye ihe API na Webmasters ka anyi nwee ike soro ọkwa anyị na isiokwu obula. Anyị na-eji ngwa anyị mara na ị masịghị ya. Nweta ya.
Ọ dịkwaghị mma ịdọrọ iPhone 4 pụọ na nzukọ. Ugbu a Droids nwere otu ngwa NA ha nwere ike mezue oku ekwentị. Need chọrọ otu iPad ugbu a na-adị jụụ na nzukọ ehihie. (Biko rụtụ aka na # 26)
Twitter, biko kwe ka anyị tinye nchịkọta na ibe anyị na nke anyị Koodu mkpọsa na njikọ inbound ọ bụla na set nke ngalaba na ọrụ gị. Ulo oru a gha akwu ugwo maka nke a ka ha wee nwee ike iju ezi ROI gafee ngwa ha na ntughari web na Twitter.
Nye ndị mmepe sọftụwia niile. Naanị n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile nwere ike akpaaka n'oge a, ekwesighi ịpụta na ịhapụ ụdị ọhụrụ ọ bụla 16 awa.
Microsoft: Biko gbochie ụlọ ọrụ niile site na iji Bing ma ọ bụ Microsoft.com yana ngwa nrụnye na nkwalite niile nke ngwaahịa Microsoft mgbe ha na-enweghị ụdị kachasị ọhụrụ nke internet Explorer na-agba ọsọ. (Ewezuga nke internet Explorer peeji nke nweta nkwalite.)
Ndị mmepe niile na ebe nrụọrụ weebụ: Biko gbochie nsụgharị niile nke Internet Explorer ihe na-erughị nsụgharị 8 ma nye njikọ ebe ha nwere ike ibudata Chrome, Firefox, Safari ma ọ bụ ọbụna Opera. Ihe ọ bụla bụ mmelite.
Apple: Kwụsị imebi ma tinye a igwefoto na iPad ugbua. Kwụsị ịmalite ịzụ ahịa.
Kwụsị ịkpọ ndị mmadụ na ntanetị nke na-arụ nnukwu ọrụ Nkume Nkume. Ha abụghị Rock Stars.
Ouzọ anọ: Usoro ọ bụla Gowalla na-eji ichota ebe kacha nso, biko zuru ohi echiche ahụ. Ana m arịa ọrịa na-achọ na ngwa gị.
Anyị maara na ọ dị ka ezi uche… ị na-eziga 1 email na ị ga-enweta ezigbo nzaghachi. Bombarding anyị na 26 ọzọ ozi ịntanetị agaghị enweta gị ugboro 26 nzaghachi ọnụego. Ekwere m gị nkwa.
Kwụsị na-ekwu okwu smack banyere gị 3 afọ echiche nke ChaCha. Anyị agbanweela ya saịtị kachasị ọsọ na Ịntanetị. Plus Scott na ndị otu ya bụ ezigbo ezigbo ndị eji arụ ọrụ.
Google: Kwụsị inye ndị ọzọ ihe Google Analytics n'efu. Ọ dịghị onye na-eji ya nke ọma ọzọ, na ị devalued nloghachi na ego na ezigbo nchịkọta ụlọ ọrụ nwere ike inye.
Ọ bụrụ na ị nwere ịdebanye aha maka obodo gị iji nweta support, mgbe ahụ na-eto uto nke obodo gị na ahịa gị na-enye ozi agwakọta. Ma nye ngalaba ahia gị ka ọ na-ebuli elu, nke ahụ dị mma.
Kwụsị ikwu ọtụtụ ihe banyere oke ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eme n'ihi na-elekọta mmadụ media. Ha dị oke mma tupu mgbasa ozi mmekọrịta!
E nweghị mfe fix ndị ahịa. Anyị nwere ọtụtụ ndị na-ajụ ase, obere oge, ndị na-eri ngwa ahịa, na ndị isi na-achọsi ike. Ọ bụ marathon ọ bụghị ọsọ. Gaa na-arụ ọrụ na-agụ na-agụ a nzuzu.
Tags: 2011Mkpebi 2011
igodo ikike pc maka ndụmọdụ gbasara ahụike pc
Feb 24, 2011 n’elekere 10:01 nke abali
Ọtụtụ echiche bara uru ebe a, huh. Ọ dị mma, ama m n'ezie na azịza m ebe a abịaghị n'oge a mana achọrọ m ka ị mara na post a nabatara m ma ọ na-enye m ọtụtụ echiche ọhụrụ m ga-eji malite. Nke ahụ bụ mkpebi intaneti buru ibu na 2011 a.